Prof. Jawaari ?Go?aan ayaa laga qaadan doonaa xilibaanada ka maqan fadhiya Baarlamanka? – Radio Daljir
Prof. Jawaari ?Go?aan ayaa laga qaadan doonaa xilibaanada ka maqan fadhiya Baarlamanka?
Oktoobar 22, 2013 3:59 b 0
Muqdisho, October 22, 2013 – Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa mar kale degniin u jeediyey baarlamanka dalka qaarkood, Prof. Jawaari waxaa uu wax laga xumaado ku tilmaamo in fadhiyo kuwa baarlamanka ah ay u baaqdaan Kooram la?aan.
Prof. Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari gudoomiyaha Baarlamanka dalka oo saxaafada kula hadlayey Muqdisho, waxaa uu sheegay in ay jiraan xilibaano caadaystay in aysan soo xaadirin fadhiyadii Baarlamanka dalka.
Waxaa uu amar ku siiyey xoghaynta guud ee baarlamanka dalka in ay soo qoraan xilibaanada Baarlamanka ee fadhiyada ka maqan si sharciga loo waafajiyo, gudoomiyaha ayaa tilmaamay in aan mar dambe la ogolaan doonin iska maqnaansho.
Wax ka bedelka xeer hoosaadka baarlamanka dalka ansixintiisa ayaa baaqatay kadib markii la waayey fadhigii la rabay ee Baarlamanka dalka, taas oo caqabad dib-u-dhac ku noqotay howlaha shaqo ee baarlamnka, Jawaari ayaa sidaan oo kale degniin hore u jeediyey.
Kooxo hubaysan oo maanta weriye Tima-cade ku dhaawacay degmada wadajir ee Muqdisho